Isiphepho uDorian: izici, izimbangela nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Siyazi ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kwandisa imvamisa namandla okuvela kwezimo zezulu zebanga elingavamile. Kulokhu, sizokhuluma ngakho ISiphepho uDorian. Kwenzeka ngoSepthemba 2019 futhi kwafakwa ohlwini lwesigaba 5. Leli zinga lesigaba yilona eliphakeme. Idale izinhlekelele ezinkulu futhi yasifundisa ukuthambekela kokushintsha kwesimo sezulu ukudala kaningi lezi zinhlobo zezimo zezulu ezimbi kakhulu.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngeSiphepho uDorian, izici zaso nemiphumela yako.
2 Ithrekhi yeSiphepho uDorian
3 Imisebenzi ethintwe yisiphepho uDorian
4 Isimo sesiphepho
Isikali sikaSaffir-Simpson uhlelo lokulinganisa iziphepho. Ihlukaniswe ngezigaba ezi-5, ezibheka isivinini somoya nomsebenzi we-cyclonic ngemuva kweziphepho, futhi kubhekela ukwanda okungavamile kolwandle ngemuva kweziphepho. ISiphepho uDorian sifinyelele esigabeni 5, okuyisona esikhulu kunazo zonke nesiyingozi kakhuluYize yehlile lapho ifinyelela eBahamas, yabangela ukulimala kanzima nokufa okungenani okuyisihlanu.
Ake sibone ukuthi isivinini somoya ngokuya ngesigaba:
Isigaba 1: Imimoya ephakathi kuka-118 no-153 KM / ihora
Isigaba 2: Imimoya ephakathi kuka-154 no-177 KM / ihora
Isigaba 3: Imimoya ephakathi kuka-178 no-209 KM / ihora
Isigaba 4: Imimoya ephakathi kuka-210 no-249 KM / ihora
Isigaba 5: Imimoya engaphezu kuka-249 KM / ihora
Ithrekhi yeSiphepho uDorian
Ngesikhathi kutholakala iSiphepho uDorian, Isikhungo Seziphepho Sikazwelonke samangala "ngokungaqiniseki ekubikezelweni kwendlela" yesiphepho. Isikhungo Seziphepho Sikazwelonke sicabange ukuthi ngenxa yobubanzi bezisombululo zokumodela, ukuthembeka kwezibikezelo zamandla kwakusephansi. Kumele kuqashelwe ukuthi izivunguvungu ezihlangene zasezindaweni ezishisayo ezinjengeDorian kuvame ukuba nzima ukubikezela.
UDorian wayenenkathi yamandla ahlomile nepompa, ikakhulukazi ngoba uthuli oluvela eSahara lwafika oLwandle lweCaribbean futhi lwanciphisa ukukhula kwalo. Ngisho nalesi simo senza ukuthi ububanzi besiphepho bugudle phakathi kuka-35 km no-75 km. Njengengxenye yokuqala, lo mzila ukhombisa ukuthi udlule ePuerto Rico nasenyakatho-mpumalanga yeDominican Republic. Abanye baze babikezela ukuthi ingafinyelela enyakatho yeCuba. Kodwa waphinde wamangala, eshiya izimvula ezimbalwa ePuerto Rico. Ekupheleni, wabhekisa amabombo enyakatho-ntshonalanga wafinyelela eBahamas naseFlorida e-United States.
I-panorama eshiywe nguDorian eziqhingini zaseBahamas ibifiphele. Okungenani kushone abahlanu kwathi abangaphezu kuka-5 balimala. Ngokombiko we-International Red Cross, okhishwe ngoMsombuluko, Septhemba 20, 2, zingaphezu kuka-2019 13 izindlu ezitholakale zilimele kakhulu kwathi ezinye zacekelwa phansi ngqo. Ngaphezu kwalokho, izikhukhula zabangela iziQhingi zase-Abaco, iqembu lama-cays enyakatho-ntshonalanga yeBahamas. Imithombo yamanzi okuphuza yayingcoliswe ngamanzi anosawoti.
Imisebenzi ethintwe yisiphepho uDorian
E-United States, ukudlula kwesiphepho kuthinte izindiza ezingaphezu kwama-600. Ngenxa yokufika kwesiphepho, izikhumulo zezindiza e-Orlando, Daytona Beach, Fernandina Beach, Jacksonville nasePompano Beach zizohlala zivaliwe kuze kube uLwesithathu. Ngaphezu kwalokho, amachweba aseFlorida nawo ayekile ukuhlinzeka ngezinsizakalo futhi nezitimela nazo zamiswa. EGeorgia, eSouth Carolina naseNyakatho Carolina, zonke izakhamizi ebezihlala empumalanga ye-I-95 zikhishwe ngenxa yamandla ezikhukhula.
Isiphepho besikhona eBahamas amahora angu-18. Kwakuyiphupho elibi ngempela. Yize bekulindeleke ukuthi yehlise ijubane futhi ize ime, bambalwa kakhulu abalindele ukuthi ukuma kwayo phezu kweBahamas kuhlale isikhathi eside kangako.
Kusukela ngoMsombuluko ntambama, uDorian uhlale cishe endaweni efanayo kwaze kwasa ngoLwesibili, lapho eqala ukunyakaza esenyakatho-ntshonalanga ngejubane lofudu: 2 km / h kamuva elanyuka laya ku-7 km / h.
Ngokusho kososayensi kunomkhuba ophazamisayo oqhamuka ekushintsheni kwesimo sezulu. Iziphepho zaseTropical ziye zaba sethubeni lokuma eduze nogu futhi zichithe amahora amaningi kulezi zifunda. Ngokusobala lokhu kuliqiniso eliphazamisayo, ngoba imiphumela emibi emadolobheni izobonakala isikhathi eside. Ngokwezifundo, isivinini sesivunguvungu sehle ngo-17%, phakathi kuka-15,4 km / h no-18,5 km / h.
Iqiniso lokuthi isiphepho siyama endaweni ethile kusho ukuthi umonakalo kuleyo ndawo uzokhula kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi umoya nemvula kuthinta izifunda isikhathi eside. Isibonelo, uHarvey wathela imvula engaphezu kwamamilimitha ayi-1.500 eHouston ngemuva kokuba lapho izinsuku ezimbalwa. ISiphepho uDorian sishaye iBahamas ngamaza aphakeme ngamamitha angamashumi amabili nemvula engaphezu kwamahora angama-48.
Ngokuya ngocwaningo, engxenyeni edlule yekhulu leminyaka, zonke izivunguvungu ezimile noma ezincishisiwe zinesizathu esikhethekile. Isizathu sihlobene nokuncipha noma ukuwa kwamaphethini amakhulu omoya. Noma kunjalo, lesi simo kukholakala ukuthi singenxa yokwehla okujwayelekile kokujikeleza komkhathi (umoya womhlaba wonke), kwakha izivunguvungu ezindaweni ezishisayo bese uhambela ngasezibondeni ezingxenyeni eziphakathi nendawo.
Iziphepho azihambi zodwa: zihanjiswa yimisinga yomoya yomhlaba, ethonywe yimisebe yengcindezi esemkhathini.
Bambalwa ochwepheshe abawuthandabuzayo umthelela wokufudumala kwembulunga yonke eziphephweni ezishisayo. UPhilip Klotzbach, isazi sesimo sezulu e-Colorado State University e-United States, uthe abukho ubufakazi bokuthi ukushintsha kwesimo sezulu kudala iziphepho eziningi, kodwa kunobufakazi bokuthi ukushintsha kwesimo sezulu kudala izimo zokuthi zibe yingozi kakhulu. Ngokwesibonelo, UDorian yisiphepho sesihlanu sesiGaba 5 ukwakhiwa e-Atlantic eminyakeni emine nje, umlando ongakaze ubonwe. Isimo esifudumele singagcina umswakama omningi ngakho-ke silethe imvula eningi. Ngaphezu kwalokho, ngokukhuphuka kwamazinga olwandle, ukuvunguza kwesiphepho kungena ngaphakathi ezweni, njengoba ulwandle luphakeme.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngeSiphepho uDorian nezici zakhona.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » ISiphepho uDorian